निधारले बताउँछ तपाइको व्यक्तित्व, जान्नुहोस् कस्तो निधार भएको मानिस कस्तो ? पुरा पढ्नुहोस – Khabar PatrikaNp
निधारले बताउँछ तपाइको व्यक्तित्व, जान्नुहोस् कस्तो निधार भएको मानिस कस्तो ? पुरा पढ्नुहोस
August 1, 2020 657
Prevशास्त्र अनुसार कुन काम कुन वार गर्दा शुभ हुन्छन ? पुरा पढ्नुहोस
Nextवीरगञ्जमा झ’डप, प्रहरीद्वारा ह’वाई फा’यर !
२ महिना अघि मात्रैबिबाह बन्धनमा बाधिएकी तेह्रथुमकि सोनिहाङमा लिम्बुको रहस्यमय मृत्यु !
मेलम्ची खानेपानीको सुरुङमा पानी पठाउँदा एक्कासि पानी खुलेपछि प्रवेशद्वारको नटबोल्ट फिटिङमा गम्भीर त्रुटि भएको हुनसक्ने अनुमान
रमेशकी बहिनीले शेयर गरीन् दाजुभाउजुको टिक-टक ‘माया माइला दाईको’ (भिडियो सहित)
अबदेखि दुईवटी श्रीमती राख्ने पुरुषलाई आवास भत्ता प्रदान गरिने